जनै ख’टिरा भनेको के हो ? यसका लक्षणहरु र उपचार, बि’धि सहित – Taja Khawar
जनै ख’टिरा भनेको के हो ? यसका लक्षणहरु र उपचार, बि’धि सहित
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ समय: १२:२२:१०
काठमाडौं / जनैखटिरा (हर्पसजोस्टर) एक प्रकारको भाई’र’ल ईन्फेक्सन हो । यसलाई पी’डादायक स’मस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने छा’लामा देखिने यो रोगमा स-साना पानीफोका जस्ता आउने खटिराहरु चिलाउनुका साथै असह्य रुपले दुख्ने किसिमको हुन्छ । चिकनपोक्सको भा’ईरस (भेरिसेला जोस्टर) भाइरसको सं’क्र’मणले यो ‘रो’ग लाग्दछ । डाक्टरी भाषामा यसलाई हर्पसजोस्टर भनिन्छ भने गाउँघरमा ज’नैखटिरा पनि भन्दछन् ।
जनैख’टिरा सबै उमेरका मानिसलाई हुन सक्छ । प्राय:गरी यो रोग त्य’स्ता व्यक्तिलाई हुन्छ, जसलाई पहिला ठेउँला (चिकेनपोक्स) भए’को वा चिकेनपोक्सको एक्सपोजर भएको होस् । त्यस्ता व्यक्तिलाई हर्पसजोस्टर हुने संभावना प्रबल हुन्छ । कारण के भने भे’रीसेला जोस्ट नामक भा’ई’रस शरीरमा एक पटक प्रवेश गरिसके पछि चिकेनपोक्स ठीक भइसकेपश्चात् पनि यो भाइ’र’स नर्वस सिस्टम जान्छ र जीवनपर्यन्त सुषुप्त अवस्थामा शरीरभित्रै रहिरहन्छ । आफ्नो अनुकूल परिस्थतिमा वा शरीरको प्रतिरोधक क्ष’म’ता कम भएमा यो पुन: देखापर्ने गर्दछ ।
मधुमेह, मुटुको रोगी, एड्स रोगी, किड्नीको रो’गी र क्यान्सरलगायतका पुराना रोगीहरुमा उनीहरुको आन्तरिक शारीरिक क्षमता क’म’जोर हुन्छ । यसबाहेक लामो समयसम्म उपचारको क्रममा स्टेराएड्स जस्तै-प्रेडनिसोन औषधिको सेवन गर्नेमा पनि हर्पसजोस्टर हुने ख’त’रा बढी रहन्छ ।
# का’रण :
यो रो’ग किन हुन्छ यसको कारण स्पष्ट त छै’न, तर चिकित्साविद्हरु (छालारोग विशेषशज्ञ)को भनाइअनुसार जब हाम्रो शरीरको प्रतिरोधक क्ष’म’ता कम’जो’र हुन्छ । जसले गर्दा शरीर कमजोर हुन जान्छ । त्यसबेला यसको भा’ई’रस नर्वस पथ-वे अर्थात् स्नायुमार्गको बाटो हुँदै हाम्रो छालासम्म पुग्छ । सामान्यतया यो रो’ग बढ्दो उमेर तथा पचास वर्षभन्दा बढी उमेर भएका मानिसहरुमा लाग्ने संभावना ब’ढिरहन्छ । यसबाहेक अन्य कारणहरुमा
– रो’ग प्रतिरोधात्मक क्ष’मता कम हुनु
– शारीरिक तथा मानसिक त’ना’व बढी हुनु
– निन्द्राको अ’भाव आदीलाई लिन सकिन्छ
दाना निस्किनुभन्दा अगा’डि प्रभावित पा’टामा दर्द हुनु यस रोगको प्रमुख ल’क्षण हो । दर्द भएको केही दिनपश्चात् त्यस ठाउँमा रातो–रातो डाबर आ’उन सुरु हुन्छ । सुरुमा छालामा मसिनो डाबर आउनु । पछि खटिराको रुपमा विकास हुनु । खटिरा घाउको रुपमा प’रिणत हुनु । सो घाउ वरिपरिको क्षेत्रको छाला अति नै संवेदनशील हुनु र छुँदा पनि साह्रै दुख्नु । ज्वरो आउनु । ख’टि’रा आउने ठाऊँमा धेरै दुख्ने । चिलाउनु, पोलेकोजस्तो अ’नुभव हुनु । झस्का हा’नेको जस्तो दुख्ने । पानीका स-साना फोका आउने । श’रीरको कुनै पाटोमा खटिरा आउने । हात, पाखुरा, छा’ती, पेट, पिठ्युँ, खुट्टा वा कुनै पनि ठाँउमा आउ’न सक्छ । तर, अधिकांश रुपमा डा’बरहरु शरीरको माथिल्लो भागमा नै निस्किन्छ । यसको अलावा कसै-कसैलाई ज्वरो आउनुकोसाथै श’रीरका जोर्नीहरु दुख्नु, टाउको दुख्नु, ब’ढी लाईट सहन न हुनु, थकान महसुस हुनु आदि जस्ता शिकायतहरु पनि दे’खिन्छ ।
# जो’खिम :
समयमा नै जनैखटिराको औषधोपचार गरिएन भने यसरोबाट प्रभावित व्यक्तिको आखाँको दृष्टि क’म’जोर हुने । बिरामीको मुख बां’गो हुने । ब्रेन हेमरेज भई बि’रा’मीको मृ ‘त्यु पनि हुन सक्छ ।
हर्पसजोस्टरको बारेमा गाउँघरमा एकप्रकारको अन्धविश्वास वा भ्रम रहेको देखिन्छ । के भने, जनैखटिरा भएपछि यो रो’ग नि’को हुँदैन । ब्यक्तिको मृ’ त्यु हुन्छ । जुन एकदमै ग’ल’त कुरा हो । जनैखटिरा आएपछि कसैलाई दुई-तीन हप्तामा ठीक हुन्छ भने कतिपय दी’र्घरो’ग’बाट पी’डि’त बि’रा’मीलाई एक/दुई वर्षसम्म यसले दु:ख दिइरहन्छ । यसकारण बेलामै संबन्धित (छालारोग विशेषज्ञ)लाई कन्सलट गरी यस रो’गको उपचार गराउनु पर्दछ ।
# होमियोप्याथिक उप’चार : होमियोप्याथिक चिकित्सामा रो’गीको शारीरिक एवं मानसिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ऊपचार गर्ने गरिन्छ । हर्पसजोस्टर (जनै खटिरा)को उपचारमा रोगीको लक्षणअनुसार प्रयोग हुने केही होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्न लि’खित छन् । जसको प्रयोग आफ्नो नजिक कुनै योग्य तथा अनुभवी होमियोप्याथिक चिकित्सकसँग परामर्श लिई प्रयोग ग’र्नु उ’चि’त हुन्छ ।
(१) रेनन्क्युलस (२) रसटक्स (३) टरेन्टुलाक्युबेन्स (४) मेजेरियम (५) आर्सेनिकएल्ब (६) सिकोटा वि’रोसा (७) थुजा (८) आईरिस भर्स (९) डल्कामारा (१०) केन्थरिस (११) परु’नस स्पाईनोसा (१२) सो’रिनम आदी ।
सं’क्र’मण अवस्थामा भएको रो’गीको ऊचित हेरविचार र सरसफाईमा वि’शेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै बि’रा’मीको लुगा, बेडसिट, तौलिया, रुमाल, काँइयो आदिलाई तातोपानीले धोएर जीवाणुरहीत बनाउने । डाबर चिल्लाएको अवस्थामा नङले वा कुनै प्वाईन्टेट वस्तुले क’न्याउनु हुँदैन । साह्रै नै चिलाएको छ भने सफा नरम कपडाले माथिबाट हल्का किसिमले सुमसुम्याने गर्नाले पनि चि’लाउनमा राहत मिल्छ । आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रामा निदाउनु पर्छ । चर्को घाममा लामो समय बस्नु हुँदैन । शारीरिक एवं मानसिक त’ना’व सक’भर कम गर्नु पर्छ ।
यस रो’गको उपचारको क्रममा बि’रामीले आफ्नो खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । उचित खानपानले पनि रोग’लाई नि’को पार्नमा मद्दत गर्दछ । यस रो’गबाट पी’डि’त बि’रा’मीले आफ्नो खानामा माछा, मासु, गेडागुडी, दूध, चिज, मुंगको दाल, लसुन, हरियो सागपात स’मावेश गर्नु पर्छ । बदाम, पेश्ता, का’जू, ओख्खर, चक्लेट, मिठा’ई, जौ, गहुँबाट बनेका परिकार भटमास आदि जस्ता खाद्य पदार्थहरुको सेवनले भा’ई’रसलाई वृद्धि गर्ने हुँदा यसलाई नखानु नै ‘वे’ श हुन्छ ।
Last Updated on: August 2nd, 2021 at 7:40 pm